Diiwaanka Taariikhda Cusub ee Heerkulka Spain | Saadaasha Shabakadda
Haddii wax aan la dareemin usbuucii hore waxay ahayd kulaylka dartiis. Diiwaanno badan oo taariikhi ah ayaa lagu duubay magaalooyin badan iyo xitaa waddanka laftiisa. Seynisyahanno iyo ururo caalami ah ayaa ka digay kor u kaca cabsida leh ee heer kulka. Rikoodhka saxda ah ee waddanku wuxuu ahaa magaalada Cordovan ee Montoro. Diiwaangashan 47,3ºC, oo ka sarreysa 0,1ºC diiwaanka hore ee Spain ee ku yaal Murcia, oo ah 47,2ºC.
In kasta oo celceliska heer-kulku aanu joogsanayn sii kordhaysa, haddana sannado ayay ahayd markii kuleylku u sarreeyay ay u xoog badnaayeen sidii kuwii usbuucii la soo dhaafay. Magaalooyin badan ayaa diiwaan galiyay diiwaanadooda taariikhiga ah. Dhexdooda, Madaarka Córdoba wuxuu diiwaangeliyey ugu badnaan taariikhi ah 46,9ºC, halkaasoo diiwaankeedii hore ee maxalliga ahaa 46,6ºC.
Diiwaanada taariikhiga ah ee dhibco badan oo dheeri ah
Sidoo kale waxaa lagu duubay 6 dhibcood oo lagu daray heerar taariikhi ah. Waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha Badajoz oo wata 45,4ºC. Cáceres, 43,2ºC, Ciudad Real 43,7ºC, Granada Air Base 43,5ºC, Jaén 44,4ºC iyo Teruel oo leh 40,2ºC.
Nasiib wanaagse, waxay umuuqataa in kuleylka uu keenayo xabad joojin, iyo khariidada halista kuleylka ee ay bixiso Aemet, in kasta oo gobolada qaar wali kujiraan digniinta oranjiga iyo jaallaha ah, inbadan ayaa yaraatay
Waxyaabaha lagu daro waa in Aemet uu tixgeliyaa in diiwaanka heerkulka taariikheed, sida kuwa lagu duubay Montoro, aan gebi ahaanba rasmi laga dhigi karin maxaa yeelay waa saldhigyo labaad. Sidoo kale sida kiiska Murcia. Marka taas rikoodhka waddanka wuxuu markaa ku jiri lahaa Córdoba oo leh 46,9ºC. In kasta oo aakhirka, dooddu intaas ka sii badan tahay. Laakiin waxa walwalka leh ee ku saabsan isku xigxiga taariikheed taariikheed ee la diiwaangeliyey iyo inta jeer ee ay ka diiwaangashan yihiin, iyo sidoo kale muddada dheer ee heerkulku ka sarreeyo 40ºC aanu joojin diiwaangelinta isku xigta
WMO waxay isku dayeysaa inay muujiso sida cimilada iyo heerkulku u sii socon doonaan, faahfaahinta gaar ahaan magaalooyinku waxay yeelan doonaan hirar kuleyl daran sababtoo ah saameynta jasiiradda kuleylka. Si loo sii wado isbedelka, Waxaan ku arki karnay 2100 magaalada Madrid, heerkul la mid ah kii Las Vegas, iyo heerkulka sida Ciraaq iyo Masar magaalooyinka kale ee Isbaanishka intiisa kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Mawjadaha kuleylka » Diiwaanka Cusub ee Taariikhda Heerkulka Spain